पहिरोमा बेपत्ता आमा र दुई छोराको शव फेला, बुबा गम्भीर घाइते
सोमबार, ४ कार्तिक, २०७६ Monday, 21 October, 2019
शुक्रबार, २७ असार, २०७६
घरमाथिबाट आएको पहिराले घर बगाउँदा आज बिहान बेपत्ता रहेका २९ वर्षीया रेखा राई र उनका छोरा चार वर्षीय रमन र सात महीनाका रोजनको शव फेला परेको हो ।
खोटाङ । खोटेहाङ गाउँपालिका–२ वाप्लुखामा पहिराले घर बगाउँदा बेपत्ता रहेका तीन जनाको शव फेला परेको छ ।
पहिराले मृतकका श्रीमान् ३१ वर्षीय विष्णु राई गम्भीर घाइते भएका छन् । उनको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार हुन नसकेपछि थप उपचारका लागि खोटाङ बजार पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वामदेव गौतमले जानकारी दिए ।
मृतकको शव परीक्षणका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिसापानी पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । बिहान करीब ५ बजेतिर पहिराले घरमा सुतिरहेका चारैजनालाई बगाएको थियो । पहिरो आउनासाथ स्थानीयवासीले विष्णुलाई उद्धार गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बेपत्ता बनेका दुई छोरा र आमालाई इलाका प्रहरी कार्यालय खोटाङ बजारबाट उद्धारमा खटिएका प्रहरी टोली र स्थानीयवासीले अपराह्नपछि मृत फेला पारेका हुन् ।
घटनास्थल जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने वाप्लुखाको गोपिनीस्थित एकान्त ठाउँमा पर्दछ । घटनास्थल वरपर टेलिफोन तथा मोबाइल सेवासमेत उपलब्ध नहुँदा बेपत्ता बनेकाको उद्धारमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ । घरदेखि करीब ४०० मिटरमाथिबाट पहिरो खसेर राई परिवारलाई घरसहित बगाएको जनाइएको छ ।
जिल्लाका अन्य ठाउँमा भएको क्षतिको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । लगातारको वर्षासँगै चलेको हावाहुरीले गएरातिदेखि विद्युत्समेत अवरुद्ध बनेको छ । विद्युत् सेवासमेत अवरुद्ध भएपछि जिल्ला अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ । अवरुद्ध विद्युत् कहिले सञ्चालन हुने भन्नेमा टुङ्गो छैन । रासस
उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत खटाइयो
सोमबार, ४ कार्तिक, २०७६
प्रधानमन्त्रीद्वारा पहिलो ‘फ्लाई ओभर’सहितको सुरुङमार्ग शिलान्यास
पुराण वाचकलाई शास्त्रीय मर्यादामा राख्न सम्मेलन
अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाइँदै
दोविल्ला क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीयस्थलका रुपमा विकास गरिने
‘मेस्सी डे’ : १५ वर्ष अगाडि बार्सिलोनाबाट मेस्सीको त्यो अफिसियल डेब्यु !
अबको समृद्धि सुदूरपश्चिमतिर केन्द्रित हुनुपर्ने : अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’
उपनिर्वाचन : दोहोरिएला वाम गठबन्धनको राप !
काँग्रेसलाई सुशासनमाथि आक्रमण नगर्न मन्त्री बाँस्कोटाको चेतावनी
जनप्रतिनिधिको तलबभत्ता गैरसंवैधानिक, आजैदेखि रोक्नु : सर्वोच्च
पारस खड्काले दिए राष्ट्रिय टोलीको कप्तानीबाट राजीनामा
रियाल म्याड्रिडको हार र एट्लेटिको मड्रिडको बराबरीले बार्सिलोनाको जित !
सन्दीप लामिछाने दुई प्रतियोगिताको लागि दुई करोडमा अनुबन्धित !
‘द हन्ड्रेड’मा सन्दीप : १ करोड ४३ लाखमा ओभल इन्भन्सिबलसँग अनुबन्धित
वुमन्स च्याम्पियन्स लिग: चितवन राईनोजको विजयी सुरुआत
भारत–चीनको सम्बन्ध सुधारले नेपालको समृद्धि यात्रा अनुकूल : प्रधानमन्त्री
‘विप्लव’का दाजुसहित पक्राउ परेका २१ नेताको नाम सार्वजनिक
नेकपा सचिवालय बैठक जारी, ६ देखि ८ जना मन्त्री हटाइने संकेत
महराले बयान दिन मानेनन्, आज फेरि अदालतबाट म्याद थपिँदै
ईमेल : sanchar[email protected]